ओली–प्रचण्डलाई मोहन वैद्यको गतिलो झापड, किन भने ‘भतुवा’ कम्युनिष्ट ? — Motivatenews.Com
ओली–प्रचण्डलाई मोहन वैद्यको गतिलो झापड, किन भने ‘भतुवा’ कम्युनिष्ट ?
काठमाडौं– नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य (किरण) ले सत्तासीन नेकपाका नेताहरुलाई ‘भतुवा’ कम्युनिष्टको संज्ञा दिएका छन् । सोही पार्टीका नेता सिपी गजुलेरद्वारा लिखित संग्रह ‘राजनीतिक घटनाक्रम र प्रवृतिहरु’ को विमोचन समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सिपी गजुरेलजीले यो पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन बारेमा राम्रो लेख्नुभएको छ । सत्तामा रहेका नेपालका केही कम्युनिष्टहरुले यतिबेला समाजवादको नारा लगाइरहेको छ,’ महासचिव वैद्यले भने, ‘उनीहरुको लगाएको समाजवादी नारा भतुवा समाजवादी नारा हो । उनीहरु भतुवा कम्युनिष्टका रुपमा रुपान्तरण भएका छ । उहाँले पनि पुस्तकमा यही अनुसार चित्रण गर्नुभएको छ ।’